Triple Dialogue | Page 14 | Radio Veritas Asia
ဆၧအဲၪဆၧကွံၩဆၧအၪ့စၪ့လဖၪ ၥီၪ့လိၪထၬဝ့ၫလီၫႉ ၥီၪ့လိၪထဲၩ့ ဖျိၩ့လံၬလၧ ပယၧၩ့ဒဲဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ၥံၪလဖၪနီၪလီၫႉ ၦလၧမိၥီၪ့လိၪထဲၩ့ဖျိၩ့လံၬၥံၪလဖၪနီၪ ဒီၪနါခိၭနၪ ဆၧဂၩ့မၧၫ့ယီၩလါဆံၭႉ
ၥီၪ့လိၪထၬ ၦဖျိၩ့နံၪ့ထၪ့ၥၫ့ အဆၧလ့ၩဆၧထဲၩ့အဂဲးလီၫႉ
tJWuGHQbWxmYzk0JxHQOd]xD;vlROHW>h< bJE,DQ ,rdtJW'd]&QvTeIbWeOHW bWxMEvm BzsdTeHUxUOYrkeHQ'dW *JEuJWxUt*J; uqH]uch]zdWeDWvDE. uJ xmYzk0JzsdTzdWOHW>h< tqdWxkR ,rdvDQzhWeJWbWeOHW BrdOhW,EBzsdTteHUpGgbJE xD;bJE,DQ c&pfteHUeDW...
မုၬမုၬလၩလၩ ပကချဲၩ့ထဲၩ့ ၦဖျိၩ့ဆၧချဲၩ့ကိၭဂၩ (၈)
ဘၪထွ့ၪလၧ ဆၧလ့ၩဆၧထဲၩ့လဖၪ ၥီၪ့လိၪထၬဘၪဝ့ၫလီၫႉ
1// rsufcHk;qGJwH (uFL]rhRxk;bDT) 2. VkSwfcrf;eD (1HWed]zsHQ0DQ) 3. oGg;wdkufwH (edWxl]1GE) 4.oGg;wdkufaq; (1HWxl]1GE) 5. eg;juyf (egxd]) 6. abgif;bD&Snf (zsUcJYxDE) 7. abgif;bDwdk (zsUcJYz}W) 8.pGyfus,f (zsU1d]) 9. acGs;cHtusD (qJYzYvR) 10....
1GEvmT zsDT1dW cdWxHR I VGQ'd]rhR y0EplWzDU
xmYzk0JrkWcGEOHW>h< BuJWxmYzk0JzsdTzdWOHWvzW BzsdTq}QqR tDW0hE [M]q}QvJW? bJE,DQeDW ,rdtJW'd] vDQOhW,EbW BxmYzk0JzsdTzdWOHWvzW ‘vm qmrQxUzsDYxJT BzsdTq}QqRtrHT vTxH;vTqh]vzW qm'WvT[d]’tzmT BzsdTq}QqRtrHT vTxH;vTqh]vzW tDW0hE[M]q}QvJWt*J;...
နမာနကြီးအားကြီး = နၥၭထၪ့ထီၫနၭလ့ၬ နသွေးကြီးအားကြီး = နၥွံၪဎိၩနၭလ့ၬ